Jumper EZbook X3 Pro Ultrabook (Space Gray) ~ ICT.com.mm
HomeJumper EZbook X3 Pro Ultrabook (Space Gray)
Jumper EZbook X3 Pro Ultrabook (Space Gray)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Display: 13.3 inch (IPS Pannel) Resolution: 1920 × 1080 FHD CPU: Intel Celeron Gemini Lake N4100 (2.40GHz) GPU: Integrated Graphic Memory: 8GB DDR4 Storage: SSD 256GB Interface: DC 3.5mm,... [Learn more]
Brand: JumperSKU: 156697N/ASee more: Computer Systems, Jumper, Laptops / Notebooks, Products, Recent Updates, Royal Ayeyarwaddy, ShopFilter by: Laptops (PC), USD
Display: 13.3 inch (IPS Pannel)
CPU: Intel Celeron Gemini Lake N4100 (2.40GHz)
Interface: DC 3.5mm, USB 3.0 × 1, Audio jack × 1, Type-C × 1, SD × 1, WiFi 802.11, Bluetooth 4.2, built-in speaker
OS: Windows 10 home License 64 bit
Battery: 5000mAh, 7.4V(3`6 hours)
Dimension(L×W×H): 308 × 200 × 13.7 mm
ပေါ့ပါးသွက်လက်ပြီး ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့ အိမ်သုံး/ရုံးသုံး Laptop ကောင်းလေး တစ်လုံးရှာနေတယ်ဆိုရင် ဒီ Jumper အမှတ်တံဆိပ် EZbook X3 Pro Ultrabook လေးက ရွေးချယ်သင့်တဲ့ Laptop တွေထဲက တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားက 13.3” နဲ့ ထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့အတွက် Laptop အရွယ်အစားသေးသေးကို ကြိုက်သူတွေသဘောကျမှာဖြစ်ပြီး ဘယ်ကိုသွားသွား လွယ်လွယ်ကူကူ သယ်ယူသွားလို့ ရမှာပါ။ IPS Pannel ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက် ကာလာအရောင်အသွေး စိုပြည်မှာဖြစ်သလို မျက်နှာပြင် Resolution က Full HD ဖြစ်တဲ့အတွက် တကယ့်အမိုက်စား ရုပ်ထွက်နဲ့ Display ကို တပ်ဆင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ CPU အဖြစ် Intel Celeron Gemini Lake N4100 (2.40GHz) Processor ကိုအသုံးပြုထားပြီး Microsoft Office Word/Excel/Powerpoint လို ရုံးလုပ်ငန်းသုံးဆော့ဖ်ဝဲတွေနဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုတာ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ၊ သီချင်းနားထောင်တာ စတာတွေကို အဆင်ပြေပြေအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ ဂရပ်ဖစ်က‌တော့ Integrated ဂရပ်ဖစ်ကတ်အမျိုးအစားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ RAM အတွက်ကို DDR4 RAM 8GB ကို ထည့်သွင်းပေးထားတာကြောင့် Software တွေအများကြီးတပြိုင်နက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး RAM မလုံလောက်လို့ စိတ်ညစ်နေရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒေတာသိမ်းဆည်းမှုအတွက် HDD ထက် ဒေတာအသွင်းအထုတ် အဆပေါင်းများစွာမြန်ဆန်တဲ့ SSD 256GB ကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ Windows အဖွင့်/အပိတ် နဲ့ Software အဖွင့်/အပိတ်ကလုံးဝမြန်ဆန်သွက်လက်နေမှာဖြစ်ပြီး Laptop စွမ်းဆောင်ရည် မြန်တာကိုမှ ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်လုံးဝသင့်တော်ပါတယ်။ ဒေတာသိမ်းဆည်းနိုင်စွမ်းက 256GB ပဲဖြစ်ပေမဲ့ USB 3.0 ပါဝင်တဲ့အတွက် External Drive နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ဒေတာတွေကို လျင်လျင်မြန်မြန် သိမ်းဆည်း/ရယူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ USB Type-C Port လည်းပါဝင်ပြီး Web ကင်မရာကတော့ 1.0MP WebCam ကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ OS အတွက် Windows 10 home License (64 bit) ကိုထည့်သွင်းပေးထားလို့ Windows Update Error တွေအတွက် ခေါင်းခဲနေစရာမလိုတော့ပါဘူး။ကီးဘုတ်က Backlit ကီးဘုတ် အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ထည်က သတ္တုနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီးပရီမီယမ်ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ လက်ပ်တော့ပ်လေးကိုသပ်သပ်ရပ်ရပ်သယ်သွားနိုင်ဖို့ Laptop Sleeve Bag လေးကို လက်ဆောင်ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ အာမခံတစ်နှစ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Narrow Frame Design of 13.3" HD Screen
Adopt with 13.3" 1920×1080 FHD HD screen and narrow bezel design, the view is wider.
The new generation of Intel Gemini Lake processors
Intel new generation Gemini Lake N4100 processor with four cores and four threads.TDP consumes as little as 6W.The performance compare with the previous generation Cherry Trail Platform has been improved and multitasking time is shortened.
Intel 9th Generation HD Graphic
Intel 9th generation HD Graphics, Similar to desktop PC-class graphic performance smoother operation.
Fan-free Design Low Power Consumption and Power Saving
Built-in 7.4V/5000mAh Polymer battery,Long stand-by time, high performance and low power consumption hardware, watching movies, playing games and constantly powering on.
Deep CNC Precision Diamond Cutting Process
Depth CNC precision diamond cutting process is performed on the edge of the body and the edge of the touch pad to outline the shining edge.
Backlit keyboard,large size touch pad
The 13.3 inch standard ergonomic keyboard enables people to enjou an accurate and fast typing experience.The large-sized touchpad provide more space for finger touch.
Total price:K867,235 K836,535
This item: Jumper EZbook X3 Pro Ultrabook (Space Gray) K746,834